Ireo antony mahatonga ny lehilahy hampirafy…
Maro ny vehivavy liana te-hahafantatra ny antony mahatonga ny lehilahy hampirafy sy hanitsakitsaka ny olon-tiany na ny vadiny. Indreto misy ampahany amin’izy ireo
Mampihena tena amin’ny papay…izao atao
Tena mampihena tokoa ny fihinanana papay. Atoro anao ny fomba hihinanana azy. Misy singa mampivalan-drano
Ranona karaoty : misoroka homamiadana, aretin’aty…
Masahina amin’ny rano, kikisana amin’ny rapy, ahandroina amin’ny entona... marobe ny fomba azo hakana ireo singa mpitondra soa ao anaty karaoty. Ilay ranony manta tsara iny, no tena mitondra voka-tsoa betsaka…
3 andro dia afaka ny mony sy tasy…
Maro be ny antony mitarika ny mony eo amin’ny tarehy. Tsy vitan’izay fa mamela tasy mamaritra be eo amin’ny hodi-tava izy ireny,
Anosipatrana : Vehivavy hita faty vao maraina
Vehivavy iray, no hita faty vao maraina teny amin’iny digy manamorona an’Anosipatrana iny omaly. Teny amin’ny manakaiky ny tetezan’Anosizato no nahitana ny nofo mangatsiakan’ity vehivavy ity, izay efa tsy nisy aina intsony ary miboridana ihany koa ka nahian’ny mponina ho nisy nanolana mialoha ny nahafaty azy.
Mitsabo volo tapatapaka amin’ny akondro
Zavatra ilaina · Akondro masaka · Tantely 2 sotro kely · Menaka coco 1 sotro kely
Efa telo volana izao izy tsy mijery anay. Izaho akory tsy mitaky zavatra be aminy, nefa rehefa miteny tsotra azy aho dia manao valy an’avona izy. Tiako loatra izy, nefa inona no mahatonga azy hanao izany ?
Tsotra be ny antony mahatonga azy hanao izany : manam-bady izy, ka tsy foiny hopotehina noho ny fiarahanareo, na noho ny fanananareo zanaka iombonana, ny tokantranony. Porofon’izany : zara izy raha manampy anareo mianaka ary tsy mahavita mijery ny zanany akory aza izy mandritra ny telo volana. Izany ny lehilahy, amin’ny ankapobeny. Tsy hahafoy ny vady aman-janany ara-dalàna ho an’ny tantaram-pitiavana any ivelany izy. Noho izany indrindra dia tokony tsy hanantena be azy ianao. Ny tena tsara aza dia ny manapaka ny fiarahana aminy, satria ho tavela eo ianao raha hiandry azy, eny na dia tsy manantena zavatra betsaka aza. Tsy tokony hanantena na inona na inona mihitsy aza mantsy ianao, indrindra raha tsy misoratra aminy ilay zaza. Ianao no miezaha hanao izay hahatafita ny zanakao, dia miezaha koa manadino azy sy manorina fiainana ho anao. Io zaza io no adidinao voalohany, fa izy aza ivakiana loha be intsony, satria efa tsy miraharaha anareo mianaka rahateo.
Sady maditra ny dadako no manampatra ny fananany vola, ka isaky ny tenenina dia manadio tena foana, na tsy mety aza ny zavatra ataony. Noroahiny tato aminay mihitsy ny reniko sy ny zokiko, satria notenenin'izy ireo tamin'ny zavatra tsy nety nataony izy. Mba ampio azafady fa tena mikorontona mihitsy ny lohako, nefa aho haka bacc amin'ity.
Rariny raha miantraika aminao ny olana misy ao anatin’ny tokantrano iainanao. Na izany aza anefa, ny tsara fantarinao aloha dia manana ny olany ny olon-dehibe, izany hoe : ny ray aman-dreny, izay tsy voatery ho fantatrareo zanany, satria tsy lazainy anareo. Tsy tokony hidiranareo rahateo izany, fa olan-dry zareo manokana. Ankoatra ireo hitan’ny masonao ireo dia mety misy olana hafa ao ambadika, ka nahatonga ny ray aman-dreninao ho tonga hatramin’ny fifandroahana. Aza hidirana lalina anefa izany. Ny fianaranao aloha izao no adidinao voalohany, dia izay imasoana. Aleo izy mivady handravona irery ny olan-dry zareo, dia miezaha mifantoka amin’ny fianaranao. Aza momba ny atsy, na ny eroa, mandehana misintaka, raha sendra eo imasonao no mitranga ny gidragidra. Sarotra ilay izy, nefa mahereza. Aleo ho azy ireo ny azy, fa manjary ianao koa no mahazo loza, raha toa ianao ka miditra amin’izany. Odio fanina fotsiny aloha, fa ataovy izay hahazoanao ny bac.
Mba mitady fanafody fanalehibizana filahiana azo antoka azafady.
Hatreto dia tsy mbola misy mihitsy fomba fanalehibiazana filahiana azo lazaina ho azo antoka, na fitaovana ampiasaina eo ivelany io, na fanafody hanina, na atsindrona, eny na ny fandidiana aza. Any am-pitan-dranomasina dia ny fandidiana ihany no fomba fanalehibiazana, na fanalavana filahiana eken’ireo manam-pahaizana. Na izany fandidiana izany aza anefa dia tsy azo antoka 100%, satria tsy mbola nisy ny fikarohana nahafahana namantatra hoe : tena afa-po tokoa ve ireo lehilahy nandalo tamin’izany ary nanao ahoana ny akony, taona maro taty aoriana. Vao 8 taona teo ho eo mantsy no nanaovana izany tany ampitan-dranomasina. Mbola tsy misy manao azy kosa eto amintsika. Ny fomba iray azo atoro anao, dia ny fanesorana iray manontolo ny volo amin’ny filahiana. Ho lehibe kokoa ny fahitana ny taovam-pananahanao amin’izay.